Ruushka iyo Maraykanka oo heshiis xabad joojin ah ka gaaray koonfur galbeed Suuriya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Ruushka iyo Maraykanka oo heshiis xabad joojin ah ka gaaray koonfur galbeed Suuriya.
On Jul 8, 2017 329 0
Dowladaha Maraykanka iyo Ruushka oo ah kuwa horboodaya duulaannada ka dhanka ah muslimiinta caalamka ayaa gaaray heshiis xabad joojin ah oo ka dhaqan galaya sida ay iyagu sheegeen gobollada dhaca koonfur galbeed dalka Suuriya.
Heshiiskan ayaa yimid saacado kadib markii dalka Jarmalka ay ku kulmeen madaxweynayaasha Maraykanka Donald Trump iyo midka Ruushka Faladamir Butin.
Dowladda Ruushka ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay iney aad usoo dhaweyneyso tallaabada xabad joojinta ee ay wada gaareen labada dowladood, taas oo ay ku tilmaamtay iney tahay mid muujineysa in labada dowladood ay iska fahmi karaan arimaha Suuriya.
Dhanka Maraykanka, wasiirka arimaha dibadda Maraykanka oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in dhankooda ay soo dhaweynayaan heshiiskan oo ah mid lagu doonayo in lagu joojiyo halganka ay wadaan Reer Suuriya ee ay ku doonayaan iney ku helaan dowlad islaami ah oo madax banaan.
Dowladda Urdun ayaa kamid ah dowladaha wax ka og kana saxiixey heshiiskan oo lagu gaaray Cumaan, maadaama xuduud beenaad ay la wadaagto dalka Suuriya.
4 gobol ayuu heshiiskan saameynayaa sida ay sheegayaan warbaahinta kuwaas oo kala ah gobolka Al-Suweydaa, Al-Quneydhara, Darcaa iyo dhulka buuraleyda Al-jowlaan ee ay gumeysiga ku heystaan Yahuudda.
Ruushka ayaa wakiil ka ah Nidaamka Suuriya, Iiraan iyo ururka shiiciga ah ee Xisbullaata, halka Maraykanka iyo Urdun-na ay wakiil ka yihiin jabhad lagu magacaabo Jabhadda galbeed oo ah jabhad cilmaani ah oo ay taageeraan Reer galbeedka.
Mucaaradka Suuriya kuwooda dibad jooga ah ayaa cambaareeyey heshiiskan, iyagoona ku tilmaamay inuu yahay mid kala qeybinaya mucaaradka Suuriya, waxaana ay wal wal ka muujiyeen heshiisyada qarsoodida ah ee ay gaarayaan Ruushka iyo Maraykanka.
Mujaahidiinta kuwooda saadiqiinta ah ee ka jihaada dhulka barakeysan ee Shaam ayaana wax saameyn ah ku yeelan doonin heshiisyada ay wada gaarayaan Reer Galbeedka, waxaana horey bayaanaad ay usoo saareen ay ku sheegeen iney Jihaadka sii wadi doonaan tan iyo inta Nidaamka Bashaar laga rido dalka Suuriyana lagu soo rogo ku dhaqanka Shareecada Islaamka.